Akara Onye Mere Nwere Mmekọrịta n’okpuru Ogwe - Karịa Alaka Ala, Biko! | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 21, 2013 Sunday, October 4, 2015 Marty Thompson
N’oge na-adịbeghị anya, m gụrụ akwụkwọ na Chọọchị nke Ahịa, nke Jackie Huba na Ben McConnell dere (mmadụ abụọ n'ime ndị maara ihe na azụmaahịa a), gbasara hoopla over at Mark Mak. Onye mere Mark bụ otu akara n'okpuru nche anwụ nke Doo ezinụlọ nke ngwaahịa.
Ọbụna enyi anyị na Raidious, Dodge Lile, kwuru ihe ụfọdụ dị nkọ. Ọ dị ka Mark's Maker kpebiri ịgbanwe ngwaahịa ha iji gbatịa ngwa ahịa na-aga n'ihu, wee si otú a na-egbo mkpa na-arịwanye elu. Ndaghachi azụ nke akara Onye mebere Mark tara ahụhụ site na ịkekọrịta mkpebi a site na weebụsaịtị ha, yana ọwa mmekọrịta, dị mma, na-ekwu ka m kwuo na m ga na-a moreụkwu mmiri n'oge na-adịbeghị anya ma ọ bụrụ na m bụ Rob ma ọ bụ Bill Samuels
Site n'ọtụtụ nkọwa m gụrụ, Onye Mere Mark Mark Club ugbu a ka a na-egosipụta dịka onye nzọpụta, dị ka onye na-agbazi ụzọ ezi omume, ma ọ bụ ụzọ eji emechi mkpọchi ọjọọ ndị a na-atụghị anya ha. Mana enwere m ihe ole na ole, nkọwa, na aro. Akara Onye mebere emeela n'ezie ịghọta na e nwere ụdị, wee nwee ụdị.
Imirikiti ngwaahịa ndị dị na pọtụfoliyo ngwaahịa na Beam agaghị abịa n'okpuru nyocha dị otú ahụ ebe nhazi dị. Ma gịnị banyere Laphroaig? Onyekwere Onye nlekota? Ndị a niile bụkwa akara Beam. Enweghị m ike icheta ihe na-akpali agụụ mmekọahụ, mkpebi siri ike karịa ịmekọrịta ngwaahịa ndị kwụgoro oge. Ma chere, ahịa ọ maara banyere mgbanwe ngwaahịa ndị a kemgbe ọtụtụ afọ? Enwere mgbanwe n'emeghị ka onye na-azụ ya? Agbaghara m ya.
Isi okwu m bụ nke a. Ozugbo ị nwere akara, ngwaahịa, nke gị dị ka onye na-eweta ọrụ ghọtara na ọ fọrọ nke nta ka ọ dị nsọ, ị na-eme mgbanwe dị ukwuu na ya, na-enweghị mmekọrịta ọ bụla na nzaghachi sitere n'aka onye na-azụ ahịa? Imirikiti ngwaahịa dị ukwuu ga-enwe ntụkwasị obi na-esote mgbe ndị isi ahịa na ndị agha ha nke ndị ọrụ aesụ gafere na ụdị ọhụụ, na ụlọ ọrụ ọhụrụ. Nke a bụ ebe ọtụtụ ụdị na-ada ada otu ha si abịaru iji mgbasa ozi mmekọrịta.
Ha na-ele anya na mgbasa ozi mmekọrịta dịka dị nnọọ ọwa ọzọ, na-enweghị iwulite obodo nke ndị na-akwado akara iji rụọ ọrụ nke ọma na akara ahụ. You enweghị ike ịme nke a site na Twitter na Facebook naanị, ma wulite mmekọrịta na-adịgide adịgide ma bara uru. O doro anya, enwere ike iji nyiwe mmekọrịta ndị a dịka ọwa nkwukọrịta maka obodo, mana ọ dị oke mkpa iwulite ọnụ ụzọ siri ike, otu elebara anya nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ, ma jiri nke a dị ka mpaghara nke mmekọrịta. Nke a ọ bụ otu ihe ahụ dị ka ịkwakọba igwe mmadụ? N'ebe ya. Branddị gị enweghị ntakịrị echiche nke onye nọ n’etiti ìgwè mmadụ ahụ, na ụdị agba ha na-eyi.
Nsogbu Bourbon na-egosikwa otu n'ime ihe ọhụrụ dị oke mkpa nke ịzụ ahịa na 21st narị afọ. Ahịa anaghị adị na agụụ, nke sitere na ụlọ nzukọ nke njikwa ngwaahịa, nkwado ndị ahịa, yana ụlọ ọrụ ndị isi. Ọ ghaghị itinye aka na mkpebi ndị bụ isi metụtara akara ahụ, ebe ọ bụla akara ahụ na ndị ahịa ya na-emekọrịta ihe. Nke a bụ ezigbo nkwa nke otu mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-esi jiri ya rụọ ọrụ, ebe ọ bụ na mgbochi ndị dịbu adịkwaghị mkpa. Agbanyeghị, anyị ekwesịghị ile anya na ihe niile na-elekọta mmadụ dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala na-akpata mbọ a. Na ime ihe ọzọ bụ ịbụ ezigbo mmeghachi omume n'ọgbọ egwuregwu nke ụwa e mekọrịtara ọnụ. A manyere onye mebere Mark n'ụzọ nkịtị ka ọ banye n'akụkụ, ọ tinyekwara ndị na-ere ahịa Beam n'otu ebe yiri ka ọ megidere koodu ahịa ha.
Mgbasa ozi na ahịa ga: "Naanị gosipụta eziokwu nke eziokwu gbasara ike mmanya ma ghara ịdị na-ekwusi ike ị alcoholụ mmanya na-aba n'anya dị ka njirimara dị mma nke ika ahụ." Koodu Ahia Nkwado.
Ma ị bụ Mark's Mark, ma ọ bụ akara ọ bụla, wepụta oge, ma gbalịsie ike ịrụ ọrụ siri ike n'azụ ihe ngosi, tupu ị dabere na mpaghara nke mmekọrịta mmadụ na ibe gị iji dozie nsogbu gị niile. Na-a drinkụ ihe atụ.
Tags: okporo osisiahia ahiabrandmbọnobodoJim beamndị na-eme akaraelekọta mmadụ media
Feb 22, 2013 n’elekere 2:41 nke abali
Aghọtara m ihe mere ha ji chọọ ime mgbanwe ahụ, ma ọ bụ mkpebi ọjọọ site ná mmalite. Mgbe m nụrụ ya na akụkọ m chịrị nwunye m ọchị wee sị “Ee nke ahụ agaghị aga nke ọma.” ma lee.. o meghị.
Feb 22, 2013 n’elekere 10:59 nke abali